China ibhokisi yebhokisi yengeniso enefreyim enomakhi womenzi kunye noMthengisi | Sihai
Ibhokisi yesakhelo engenanto inokuphinda isetyenziswe kumashishini amaninzi, njengokupakisha, ukuhambisa ngenqanawa, ibhokisi yengeniso, isitora, indawo yokugcina izinto, ukuhambisa iimveliso njalo njalo. Ibhokisi yesakhelo esinebhatyi nayo inokuba ibhokisi ye-ESD kunye nebhokisi eqhubayo, esetyenziswa ngokubanzi kwi-elektroniki, iimveliso ze-elektroniki, iinxalenye zombane zombane, ingeniso yefowuni kunye neenxalenye zemoto zokuhambisa kunye nokuhamba.
Ibhokisi yengeniso yebhokisi enamaphepha ngokweemfuno zomsebenzisi inokwenziwa ngokweziqulatho ezahlukeneyo, ubukhulu, i-aluminium ingxubevange yomda, inokubanjiswa, ingabi nothuli, intle kwaye inesisa imbonakalo. Ibhokisi yengeniso yebhokisi engenanto ayinetyhefu, ayinambitheki, ubungqina bomswakama, ukungangeni manzi, ukumelana nokubola, ubunzima bokukhanya, ukuhlala ixesha elide, ukubambeka nokubonakala okuhle, umbala otyebileyo, ococekileyo, onokuphinda usetyenziswe, ukhuselo lokusingqongileyo, akukho kungcoliseka kunye nezinye izinto.
Izibonelelo ze "ibhokisi yengeniso" kufuneka ziqheleke kuwo wonke umntu. Inobuhlobo kwindalo, ihlala ixesha elide, iyonga kwaye ilungile. Ke ngoko, ibhokisi yengeniso ayinakwahlulwa kulungiselelo lwelizwe lam kunye namanye amashishini abalulekileyo. Zininzi iindidi zemveliso ekrwada yokuvelisa, kwaye enye eqhelekileyo yi-PP. Izinto zebhodi.
Iimveliso zebhodi ezihombileyo ezingaqhelekanga zinezibonelelo zokungangenwa ngamanzi, ubungqina bokufuma, anti-umhlwa, ukungangqinelani, ubunzima bokukhanya, njl. Ngokusisiseko, akukho zintsilelo. Ngaphandle kokuba umthengi afune iimveliso okanye iibhokisi ezigqitha kuluhlu lokuthwala umthwalo webhokisi engenayo yebhodi engenanto, ke ezinye iimveliso ezinje (Iibhokisi zePlastiki zengeniso, iibhokisi zokubambisa) kunye nezinye iimveliso ziye zatshintshwa, kodwa ixabiso laso lixesha elininzi iibhodi. Ngaphaya koko, iibhokisi zengeniso yeplastiki kunye neebhokisi zeebhodi ezinezinto ezininzi ezingalunganga:
Iibhokisi zengeniso yeplastiki zikwabizwa ngokuba ziiPP okanye iibhokisi zengeniso yePE. Basenokuqhekeka emantla okanye ngenxa yeqondo lobushushu eliphantsi ebusika. Ukuba izinto ezijiyileyo zisetyenziselwa ukumelana nobushushu obuphantsi, inokunyusa ubunzima bayo yonke ibhokisi. Ubunzima benza abasebenzi ukuba bazive benoxinzelelo ekuthuthweni nasekuphatheni, kwaye ixabiso lebhokisi liya kubiza kakhulu emva kokunyuka, kwaye iya kuba nefuthe elithile kwimidla yoqoqosho yomntu wonke. Ngokubanzi, izinto eziluncedo ngeebhokisi zeeplastiki ezingeniso zingaphezulu kokungalunganga, kwaye kulula kakhulu ukuzisebenzisa. Abantu abaninzi basazimisele ukukhetha iibhokisi zengeniso yezi zinto.
Egqithileyo ipheyini yekheji yokugcina
Okulandelayo: pp umhadi ibhotile umaleko iphedi